Fri, Dec 6, 2019 at 12:59pm
ट्रम्पसँगको विवादास्पद भेटवार्तापछि रूसका विदेशमन्त्री लाभरोभ अमेरिका जाँदै #आहा खबर# गौरिकाले पौडीमा जितिन् दोस्रो स्वर्ण, नेपालको स्वर्ण ४१ पुग्यो #आहा खबर# १३औँ साग : भारत्तोलनका विकासले जिते नेपालका लागि ४०औं स्वर्ण #आहा खबर# निजी क्षेत्रका दुई ठूला वाणिज्य बैँक एकीकृत #आहा खबर# बैंकको पारा देखेर लाज लाग्यो : गभर्नर नेपाल #आहा खबर# क्याबिनेट डाकेर प्रधानमन्त्री ओलीले के के निर्णय गर्दैछन् #आहा खबर# ओरालो लाग्दै सुनको मूल्य, कतिमा हुँदै छ कारोबार ? #आहा खबर# नेपालको विकासमा जाइकाको सहयोग महत्वपूर्ण : मन्त्री ज्ञवाली #आहा खबर# चित्रकलाबाट संरक्षणको अभियान #आहा खबर# ४ वर्षपछि शुरु भयो जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक विस्तार कार्य #आहा खबर# सुन्तलाका बोट मर्न थालेपछि किसान चिन्तित #आहा खबर# भान्सामा औषधी : ग्यास्ट्रिकबाट छुटकारा र क्यान्सर भगाउन मरिच उपयोगी #आहा खबर# समृद्धिका लागि पाँच आधार तय गरिएको छ : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल #आहा खबर# राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको तयारीमा आयोग : को-कसको सकिदैछ कार्यकाल ? #आहा खबर# भोलि काठमाडौंका यी रुटमा गाडी चलाउन पाइने छैन #आहा खबर#
शुक्रबार, २४ श्रावन २०७६,	आहाखबर	9.89K
दुईपांग्रे सवारीसाधनबाट यात्रुलाई सेवा दिइरहेको पठाओले अब चारपांग्रे सेवा सुरु गरेको छ । पठाओ कम्पनीले शुक्रबारबाट काठमाडौं उपत्यकामा यो सेवा सुरु गरेको हो ।
यस सेवाका लागि मोबाइल एपमार्फत् दुईपांग्रे तथा चारपांग्रे सवारी अडर गर्न सकिन्छ । पठाओले शुक्रबारबाट काठमाडौं उपत्यकामा सेवा सुरु गरे सँगै उपत्यकाका तीन सय ट्याक्सी पठाओमा जोडिएको जानकारी दिएकाे छ ।
चारपांग्रेमा पनि कार लाइट र कार प्लस गरी दुई किसिमको सेवा कम्पनीले उपलब्ध गराएको छ । कार प्लस लाइटभन्दा झन्डै दोब्बर महँगो छ । पठाओको कार अर्डर गर्न नै सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यसलाई कम्पनीले सेवा शुल्क भनेको छ । “ट्याक्सी अर्डर गरेका यात्रु लिनका लागि डेढ किमिसम्म टाढा पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सर्भिस चार्ज सय रुपैयाँ उठाउने गरेका छौं,” पठाओका म्यानेजर शशांक थापाले भने ।
यात्रुको अर्डर लिन मोबाइलमा अनलाइन गरी चालक बस्नुपर्ने हुँदा इन्टरनेटको खर्च र यात्रु लिनका लागि भनेको स्थानसम्म पुग्नुपर्ने हुँदा पेट्रोल खर्च हुने भएकाले यात्रुबाट सय रुपैयाँ लिने गरेको उनको तर्क छ । सवारी र यात्रुको संख्या बढेपछि यो शुल्क घटाउने उनले बताए ।
मोटरसाइकलको हकमा भने सुरुको अर्डर रकम ३० रुपैयाँ छ । यात्रुले सवारीसाधन अर्डर गर्दा पुग्नुपर्ने ठाउँको दूरीअनुसार मोबाइल एपमा नै सर्भिस चार्ज जोडिएर कुल भाडा देखिन्छ । सर्भिस चार्ज सय रुपैयाँ जोडेर यात्रुले तिरेको भाडाको ८० प्रतिशत रकम चालकले पाउँछन् भने २० प्रतिशत रकम पठाओ कम्पनीले पाउनेछ ।